FAQs - Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.
Handray santionany alohan'ny fividianana ve aho?
Eny, maimaimpoana ny santionany 1, manarona fotsiny ny vidin'ny fandefasana entana
Handray santionany amin'ny sary sokitra voasokitra ve aho?
Eny, mba andefaso aminay ny sary famantarana Ai na rakitra cdr ary aloavy ny vidin'ny famokarana, matetika USD50 karazana 1
Ahoana no ahafahako mamolavola ny sangan'asa?
Afaka nanome habeny fanontana sokitra ho anao izahay, ny kantonao dia tokony ho ao anatin'io habeny io. Na mandefa ny famolavolana ankehitriny ho anay, ny mpamorona antsika dia mety hampitombo na hampihena ny habeny.
Manome serivisy fiatoana tokana ve ianao? Toy ny marika, boaty na kitapo ary zavatra hafa?
Eny, afaka manome traikefa fividianana tokana izahay, mandefa sary na fangatahana antsipiriany ho an'ny olona mpivarotra fotsiny izahay.
Inona ny fotoanan'ny mpitondra?
Tahiry ao anatin'ny 1 herinandro, Famokarana: matetika 35 ka hatramin'ny 45 andro aorian'ny fahazoana 40% petra-bola, raha manao pirinty vita amin'ny landy, manao pirinty mafana dia hanampy 10 hatramin'ny 15 andro ny fotoana.
Tsy misy fikirakirana ambony na fanontana sary, MOQ mitovy amin'ny tranokala; Logo manokana, MOQ: 5000pcs, vokatra Stocks dia miankina amin'ny zava-misy marina.
Inona no fanolorana ambonimbony azo?
Fanoratany, Fanontana pirinty, Fametahana hainganana, Fametahana marika, firakotra UV sns.
Nahazo tahiry foana ve ianao?
Ny stock dia tsy misy mandritra ny fotoana fohy, alohan'ny fividianana azafady mifandraisa amin'ny mpivarotra fizahana stock.
Afaka mahazo fanafody ve aho raha mandray ireo vokatra misy kalitao simika na ratsy?
Misy olana tapaka na kalitao, mifandraisa aminay ao anatin'ny 15 andro aorian'ny nahazoana entana. Makà sary na fandefasana horonan-tsary any amin'ny mailaky ny mpivarotra.
Mampanantena ny vokatra rehetra amin'ny vidiny marina izahay, tsara ny kalitao. Raha mihevitra ny vidiny mora kokoa ny mpanjifa, dia hampahatsiahy anao izahay fa tsy tsara ny kalitao, raha mbola mividy ny mpanjifa dia tsy handray andraikitra izahay